6 Ndụmọdụ Savvy Iji Mee atụmatụ Njikọ Ọgbakọ Na Mmefu Ego | Save A Train
Home > Travel Europe > 6 Ndụmọdụ Savvy Iji Mee atụmatụ Njikọ Ọgbakọ Na Mmefu Ego
Ekwesiri ekwenye na njem bụ otu ihe ịzụtara ka ọ bụrụ ma ọ bụ nwee afọ ojuju! Ọ naghị adị mkpa mgbe niile na ị ga-ewepụ ego gị tara ahụhụ na-eri iji kpata akụnụba ahụ. Ka m na-eme atụmatụ ịbanye n'agwaetiti ebe okpomọkụ na-amụrụ ọnụ, ma ọ bụ slopin kpuchie snow, Ma ọ bụ ihe ọzọ, ahịhịa na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, are na-eme ọtụtụ mkpebi mgbe niile. Mee ka nrọ gị mezuo site na-eme ka otu ihe kwa mgbagwoju anya. Soro ndị otu gị nọrọ ma mee atụmatụ n'ime mmefu ego gị. Mee njem gị niile ka ọ bụrụ ihe efu. Njem ndị otu bụ ụzọ dị mma isi nwee mmekọrịta dị mma. Mana ọ bụghị ụgbọ mmiri niile na-aga nke ọma, ọ bụrụ na emeghị izu ezu na izu oke. Ọ nwere ike iyi ihe ezi uche na-adịghị na-echekwa ego maka njem, mana ihie zuru oke na ya. Zere àgwà niile na - adịghị mma metụtara njem otu ma mee atụmatụ n'ụzọ ezi uche dị na ya. Guo n'okpuru atụmatụ isii a na - enye nsogbu na - abụ ihe kachasị njọ iji hazie njem otu mmekọ na - mmefu ego.
1. Kpebie Ego Maka njem njem
Ee! Ị nwetere ya! First ga-ebu ụzọ kpebie ebe ị ga-aga iji mara ihe ị ga-emefu. Ma mgbe ụfọdụ ọ na-aghọ aghụghọ, dị ka ha abụọ na-agbakọ. Ọ bụkwa ihe dị mgbagwoju anya. Ọ bụ ezie na ị na-eme atụmatụ njem gị na-esote gị na ndị enyi, ọ bụghị mmadụ niile ga-azụtali ya. N'ihi ya, soro n’obere ego, kpebiri n’otu. Atụmatụ ahụ niile ga-aga nke ọma, dika otutu n'ime ndi otu a aghaghi inwe mmetuta nrụgide na itinye ego buru ibu. Ọzọkwa, ime mkpebi maka ịhọrọ ebe ị ga-agbagha, ọkachasị na eburu ụzọ tinye n’uche. N'ihi ya, ị, ya na ndi otu ndi ozo, nwere ike ịkpọ oku maka mmefu ndị ọzọ dị ka ụgbọ elu, mgbazinye, nri, apụ, na ọtụtụ ndị ọzọ. Mmekọrịta zuru oke bụ ihe achọrọ, mgbe ị na-ezube njem otu, idozi ọnụ.
Luxembourg na tiketi ụgbọ oloko na Brussels
Antwerp na tiketi ụgbọ oloko Brussels
Amsterdam na Brussels Train tiketi
Paris na Brussels Train tiketi
2. Gbasaa Ego efu zuru oke
Gbalịa ịchọpụta otu esi emefu ego gị. Kpebie ụzọ isi kewaa ego niile ndị otu a na - eme. Dị ka ọmụmaatụ, ị ga-akwụ ụgwọ naanị maka ntinye akwụkwọ ụlọ nkwari akụ niile, ma ọ bụ na ị ga-ekere òkè otu ihe ahụ na ọkara? ma ọ bụ, interested nwere mmasị ị were ọrụ dị ka igwu ụlọ ọrụ na ịhapụ ọrụ ụbọchị?? N’ọtụtụ njem, iweghara otu ọrụ buru ibu kwesịrị ịja mma. Ọ na –ebelata nsogbu ma mekwaa ụgwọ niile metụtara njem.
Y’oburu n’uche ime njem buru ibu iweputaghi n’oge, Gbalịa ịhazi akaụntụ nkeonwe. Tokwesiri ime otu ihe ahụ tupu oge eruo. Ndị niile sonyere na njem otu a nwere ike itinye ego ha kwụrụ, kwa ọnwa, iji chekwaa nsogbu oge ikpeazụ. Ọ bụ ọrụ mara mma karịa ijide ezigbo ụlọ oriri na ọ .ụ .ụ, -gbọ elu ikuku, na nri mara mma.
3. Kwere na ụgbọ elu nke akụ na ụba yana ebe ndị enyi na-enwe ọ Yetụ na ebe enyi
Mgbe ị na-eme atụmatụ njem maka njem otu, ịbụ ntakịrị providence na ego gị. Gbado anya na ndị na-ebu azụmahịa. Enwere ọtụtụ ụgbọ elu dị ọnụ ahịa, na-anakọtara ọnụ ọgụgụ njem njem. Mee atụmatụ ị ga - eme soro gị na ndị otu gị kwurịtara ihe nzuzo gị. Dị ka ọmụmaatụ, ị nwere ike nzu si njem atụmatụ gị Rome, Athens, na Istanbul site na Malta. Ma ọ bụ ihe ọzọ, ibido njem otu gị si Berlin na Prague, Budapest na Riga bụ nnukwu nhọrọ! Ma olee maka njem njem njem ma ọ bụ ịnwale izu ezumike ogologo izu n'ọhịa n'ọhịa gị na ndị otu gị? Ọtụtụ mgbe, ihu igwe na-arụ ọrụ dị ka ihe mgbochi. N'agbanyeghị mmiri na-ezo, anwụ na-acha ọkụ, ma obu ikuku ikuku, ejegharị n'ime ụgbọ ala enyere aka na a ugba elu ụlọ, bụ ngọzi! Ọ na-agbakọ mkpuchi zuru oke na ịghachite akpa mkpuchi akpọchiri ma na-eme dum njem ahụmahụ onye nwere izu ike.
Paris na London Train tiketi
Tiketi maka Berlin na London
Brussels na London Train tiketi
4. Mee Smart ka ị na-enye nri
Njem otu na - abụkarị ihe ịga nke ọma mgbe enweghị mgbagha ma ọ bụ arụmụka metụtara nri, ọ kachasị. Ee! Ọtụtụ njem otu na-akpalite nlelị mgbe nlebara anya na ajụjụ metụtara onye otu ọ bụla. N'ọnọdụ ndị dị otú ahụ, echiche ziri ezi na iri nri kwesịrị ịbụ nzube gị. Ikewa n'ime ụlọ oriri na ọ checkụ restaurantụ na-ekwe nkwa nsogbu na ọgba aghara n'etiti ndị otu. Dị ka ọmụmaatụ, n’otu ìgwè iri, onye na-alụbeghị di na-akwụ ụgwọ ahụ dum nke a karama mmanya, emesia ndi ozo n’otu n’uche na etiti oge, a ga - enwe ọgba aghara dị egwu. Ya mere, kwenye na kewaa nlele oge niile. Ma ọ bụ ihe ọzọ, ga - eme ya site na 'otu ụzọ ibe.' Kwupụta òkè gị na ụfọdụ ndị ọzọ nọ n'ìgwè ahụ gaa n'ihu n'ịkwụ ụgwọ ahụ..
Milan na Rome Train tiketi
Florence na Rome Train tiketi
Pisa na Rome Train tiketi
Naples ka Rome Train tiketi
5. Ekwe Ego Zuru Ego na Mmefu
Chọrọ ka ị daa ụda nke teknụzụ, ma guzoro dị ka onye nwere ọgụgụ isi n'etiti otu ahụ? Nweta enyemaka nke ngwa ịntanetị dị iche iche na-egbo mkpa gị niile, metụtara mmefu. Yi uwe na ngwa dị ka Splitwise ma ọ bụ Akwụkwọ Google, ebe ha abụọ kwere ka ndị niile nọ n’otu ahụ banye, lee ma dezie, dika ihe ha choro. Ma lezie anya ka akụkụ ha dị mma na nke na-adịghị mma.
Mepụtara otu na ngwa ndị a, ebe ndị otu ahụ nwere ike ịbanye ngwa ngwa ma nwee ike kewaa ụgwọ niile na pasent. Alerts na-ezigara ndị dị iche iche ihe ncheta enyi na enyi maka ichebe ụgwọ ahụ. Ka ị na-eme atụmatụ idozi ego njem ndị ahụ, zere idobe nsogbu ma ọ bụ idozi ego na ọnụ. Cheta nke a ka ihu n’udo njem gaa n’ihu.
Amsterdam na Paris Train tiketi
Tiketi London na Paris Train
Rotterdam na Paris Train tiketi
Brussels na Paris Train tiketi
6. Kpebie Ego niile (Ọ bụrụ na)
Ozugbo ị ga - enwe ọ tripụ na njem otu gị ma were ọ happụ laa, oge eruo idozi ego ochie gị (ọ bụrụ na)! Ọ ka mma idozi ụgwọ ọ bụla, n'oge oge ị kwadoro. Ma ọ bụghị ya, ọ dị ka ibu! Ọtụtụ na-ahọrọ ịkwụ ụgwọ site na ngwa dị iche iche dị n'ịntanetị, dị ka ọ na-ada ụda savvy. Na ụfọdụ ndị nwere ọgụgụ isi nwere mmasị n'ịkwụ ụgwọ n'onwe ha, na ego. Gbaa mbọ hụ na ị kwụrụ ụgwọ n'ime otu izu ma ọ bụ karịa. Ma ọ bụ ihe ọzọ, invitation ga-aga akwụkwọ ịkpọ oku maka njem otu ọzọ.
Hụ kwa: https://www.saveatrain.com/blog/traveling-europe-budget/
Brussels na tiketi maka Amsterdam Train
London na tiketi Amsterdam Train
Berlin na tiketi maka Amsterdam Train
Paris ka tiketi ụgbọ elu nke Amsterdam
Ọ dịghị, ma nkwenkwe hiere ụzọ nke ọtụtụ ndị na-ejegharị na gburugburu ụwa agaghị ekwe omume na-enweghị kaadị akwụmụgwọ na-enweghị njedebe ma ọ bụ usoro ego. Ma ọ bụ ọ bụrụ na mmadụ na-akwado njem ahụ dum! Mana ọ ka mma ịghara ikwere na otu. Ọ bụ n'ezie na njem adịghị ewere na enweghị ego efu. Ntụziaka ahụ edepụtara n’elu ga-ejidere gị na ndị gị na ha ga-eso pụọ maka ọtụtụ njem na-abịa. Gosiputa mkpebi gi, soro ndị njem ndị ọzọ mee njem, mgbe ahụ njem otu a agaghị abụkwa nrọ!
Jiri ụgbọ oloko gaa kọntinenti ahụ na akwụkwọ na Save A Train!
Ị chọrọ Embed anyị blog post “6 Ndụmọdụ Savvy Iji Mee atụmatụ Njikọ Ọgbakọ Na Mmefu Ego” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fgroup-trip-on-budget%2F%3Flang%3Dig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
mmefu ego uzo Otu travelbytrain traveltips TripOnBudget